Hordhac: Man City Vs Leicester City: Riyad Mahrez Oo Ka Hor Iman Kara Kooxdii Uu Sida Weyn U Doonayay – Kooxda.com
Home 2018 February Ingiriiska, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino Hordhac: Man City Vs Leicester City: Riyad Mahrez Oo Ka Hor Iman Kara Kooxdii Uu Sida Weyn U Doonayay
Hordhac: Man City Vs Leicester City: Riyad Mahrez Oo Ka Hor Iman Kara Kooxdii Uu Sida Weyn U Doonayay
Kooxda Man City ayaa isha ku haysa in ay ku soo laabato wadada guulaha kadib markii ay bar-baro niyad jab leh kala kulantay kooxda Burnley todobaadkii hore.
Citizen ayaan wax guul ah gaarin 3-dii kulan ee ugu dambaysay ee horyaalka ay ku ciyaartay meel ka baxsan garoonkeeda laakiin City ayaan wax guuldaro ah kala kulmin 25 kulan oo ay ku ciyaartay Premier leaue garoonkeeda.
Dhanka kale Leicester city oo aan wax guul ah gaarin labadii kulan ee ugu dambeeyay ayaa ku rajo weyn in ay noqoto kooxda soo afjarta guulaha xiriirka ah ee Man city.
Kulanka: Man City Vs Leicester City
Wakhtiga: 8:30 Habeenimo
Man City ayaan wax guuldaro ah la kulmin 25-kii kulan ee ugu dambeeyay ee premier league ah ee ay ku ciyaartay garoonkeeda Etihad waana rikoorka 2-aad ee ugu dheer ee guuldaro la,aanta iyada oo chelsea ah kooxda ugu badan ee guuldaro la,aanta ahayd garoonkeeda iyada oo aan guuldaro la kulmin 26 kulan.
Sergio Aguero ayaa dhaliyay 6-dii kulan ee ugu dambeeyay ee ka dhacay garoonka Etihad Stadium ee yartamada oo dhan isag oo dhaliyay 10 gool laakiin waligii gool muu dhalin 7 kulan oo xiriir ah oo garoonka City ah.
Saddexdii gool ee uu Jamie Vardy ka dhaliyay Man City ayaa yimid kulan kaliya waxana uu ahaa kulankii ay Leicster city 4/1 uga badisay City bishii December sanadkii 2016, waana xiddig ka mid ah 3-da xiddig ee city ka dhaliyay 3 gool isaga oo soo raaca xiddigaha Gabby Agbonlahor Iyo Tony Cottee.
Leicester city ayaan wax dhibic ah ka helin 9-kii kulan ee ugu dambeeyay horyaalka kooxaha kaalinta 1-aad ku jira iyaga oo guuldaro kala kulmay 9-ka kulanba iyaga oo waliba laga dhaliyay isku gayn goolal ah 3 ilaa 20 gool